Luna, usoro ihe eji egwu egwu nke Amazon, emere na June 21 | Esi m mac
Amazon si gụgharia egwuregwu n'elu ikpo okwu Luna malite na June 21
Toni Cortes | 14/06/2021 22:00 | Egwuregwu
O yiri ka ugbu a na ọdịnihu nke dijitalụ anyị na-aga site na ama «gụgharia«. Na mbụ, ọ bịara maka egwu ahụ. Nyochawa ya kachasị mfe ịmalite. Ọ malitere Spotify afọ ndị gara aga, na ndị na-esonụ sochiri. Ihe ịga nke ọma dị egwu. Ọtụtụ egwu a na-anụ n’ụwa niile taa na-aga.
Na mgbe ya, na video. Ọ dịghị mkpa ịkọwa ihe ịga nke ọma nke Netflix na nyiwe vidiyo gụgharia niile dị taa, nke megharịrị anyị anya na ọnwa ndị a nke ọrịa na-efe efe. Ma ugbu a, egwuregwu vidio na-asọkwa. Enweela ọtụtụ nyiwe ndị na-apụta. Luna nke Amazon malitere June 21, dakọtara na Macs, iPhones na iPads. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'agbanyeghị Apple.
Amazon ga-emeghe ohere nkwado ya ọhụrụ gụgharia egwuregwu n'elu ikpo okwu a na-akpọ Luna na June 21 na 22, nke ga-enye onye ọ bụla nwere akaụntụ Amazon Prime aka ịnwale ọrụ ọhụrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ ịntanetị ga-enye anyị.
Amazon ahịa ga-enwe ike inwe a ụbọchị asaa free ikpe maka Luna na Primebọchị Ndị Isi Obodo Amazon, June 21 na 22. Agbanyeghị na onyinye ahụ pere mpe na oge, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ idebanye aha ha n'ọrụ mgbe ikpe ahụ gwụchara. Na mbụ, ịnweta Luna bụ ọkpụkpọ oku naanị na ngwaọrụ Amazon Fire TV.
Site ugbu a gaa n'ihu, ikpo okwu a na-emeghe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla nwere ezigbo ịntanetị. Luna ga adi maka MacOS, Windows, Fire TV, tinyekwara na ngwaọrụ mkpanaka dịka iPhone, iPad na gam akporo site na ihe nchọgharị weebụ.
Amazon agbasoro nzọụkwụ Microsoft
Amazon agbaso nzọụkwụ Microsoft na-ahuta nsogbu ndi Xbox nwere nwere inwe ngwa iji nweta ya Cloudgba Cha Cha ikpo okwu na Apple Store. Microsoft mechara nwee ike 'ịgbachi' mgbochi nke Apple machibidoro, na-eme ka ikpo okwu ya na-egwu egwu ebe ọ bụla ihe nchọgharị weebụ. Amazon abanyela na "slipstream."
Nke izizi ekwuputara na Septemba 2020, Amazon Luna dị iche na ọrụ igwe ojii dị ka xCloud site na ịdabere na "ọwa" ma ọ bụ ngwungwu egwuregwu, dị ka Ubisoft +. N'ụzọ ahụ, Luna dị ka igwe USB karịa Netflix. Ndị ọrụ na - ahọrọ “ọwa” ha chọrọ ịdenye aha na ya.
Luna akwụ ụgwọ 5,99 Euro kwa ọnwa na Basic Access, na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta oke oke aha dị ka "Njikwa", "Ọpụpụ Metro" na "Grid". Ndị ọrụ nwekwara ike ịdenye aha na Ubisoft + beta, nke na-enye ohere ịnweta aha dị iche iche site na onye nrụpụta ahụ maka .14,99 XNUMX kwa ọnwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » Amazon si gụgharia egwuregwu n'elu ikpo okwu Luna malite na June 21
MacOS 3, watchOS 11.5, na tvOS 7.6 onye nrụpụta beta 14.7 wepụtara
Nkwupụta na ọwa Apple Music "Beyond Stereo"